नारायण शर्मा | जेठ ३, २०७७ शनिबार | 0
छिमेकीले बनायो मूलबाटो...
नेपाल आमाको छातीमाथि यतिबेला दुष्ट छिमेकीले बिषालु नङ्ग्रा गाडिरहेको छ । नेपाल आमाका अङ्गहरु चुँडिएका छन्, लुछिएका छन् । नेपाल आमाको छाती लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने मूलबाटो खनेको छ– दुष्ट छिमेकीले । नेपाल आमाले आफ्नो अस्मिता रक्षाका लागि गुहार मागिरहेकी छिन– आफ्ना सन्तानहरुसङ्ग । अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरहरुले इतिहासमा देखाएको त्यो वीरतालाई फेरि एकपटक बिउँझाउन आव्हान गरिरहेकी छिन् नेपाल आमाले । नेपाल आमाको त्यही पुकारलाइ बोकेर देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत रहेको एक गीत आएको छ– आमा तिम्रो छातीको पाटो ।
राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा चर्चित सर्जक रमेश बिजीको शब्द सिर्जना र वरिष्ठ लोकगायक नारायण रायमाझीको सङ्गीत रहेको यस गीतमा स्वर नारायण रायमाझी र शान्तिश्री परियारको रहेको छ । सरल शब्दहरुमा देशभक्तिको मार्मिक भाव अभिव्यक्त गरिएको यो गीत सुनेपछि केही नलेखी बस्न मनले मानेन । गीतले साँच्चै नै नेपाल आमाको अहिलेको यथार्थ व्यथा समेटेको छ ।
भन्थे बरै पुर्खाले त अझ धेरै थियो
निमोठेर खायो हजुर चिमोठेर खायो
दक्षिणतर्फको धुर्त छिमेकीको विस्तारबादी नीतिका कारण हाम्रो देशको सिमाना दिन प्रतिदिन साँघुरिदै गइरहेको छ । पश्चिम दार्चुलाको लिम्पियाधुरादेखि पूर्व ताप्लेजुङको तुम्लिङसम्म दर्जनौं स्थानहरुमा गरेर कुल ६१ हजार हेक्टर नेपाली भूमि लुटेको छ दुष्ट छिमेकीले । ऊसङ्ग सीमा जोडिएका हाम्रा २६ जिल्लामध्य २३ वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ उसले । दार्चुला जिल्लामा मात्र कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म ३७ हजार हेक्टर नेपाली भूमि निमोठेको छ– दुष्ट छिमेकीले । नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार ५ सय हेक्टर नेपाली भूमि मिचेको छ । पूर्वको चियाभञ्ज्याङमा ४ हजार १ सय हेक्टर नेपाली जमिन लुटिएको छ । गीतले ठिकै भनेको छ– इतिहासमा नेपालको सिमाना यो भन्दा झनै विशाल थियो । पश्चिम किल्ला काँगडादेखि पूर्वमा टिस्टासम्म नेपालकै भूमि थियो पहिले । दुष्ट छिमेकीले छलकपट गरी हामीबाट छिनेको थियो– मेचीपूर्व र महाकाली पश्चिमको जमिन । छिमेकीको भूमि लुट्ने बानी परेको धुर्त दक्षिणी छिमेकी भारले त्यसपछि पनि निरन्तर नेपाली भूमि निमोठिरहेको छ, चिमोटिरहेको छ । नेपाली जनतालाई उठिबास लगाउन खोजिरहेको छ । ‘आमा तिम्रो छातीको पाटो’ गीतले दुष्ट छिमेकीको असली रुप छरपस्ट पारिदिएको छ ।
पराइले परेड खेल्दा आफ्नै छातीमाथि
आफ्नै माटो जोगाउन माटै बनम् बरु
बिउँझ न ए अमरसिंह र बलभद्रहरु
अब बेला आएको छ देशको माटो जोगाउन वीर पुर्खाहरुको वीरताको गाथालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने । देशका माउधनीहरु नेपाल आमाको अस्मिता दुष्ट छिमेकीले लुटिरहँदा रमिते बनिरहेका छन् । देशको अभिभावक मानिने सरकार लाचार बनिरहेको छ । दुष्ट छिमेकीको अत्याचार निकै बढेर गएको छ । यस्तोलाई पनि कसरी छिमेकी भन्नु ? जसले अप्ठ्यारो र विपत्ति परेका बेला सहयोग गर्नुको सट्टा मौका छोपेर झनै लुट्ने काम गर्छ । भूकम्पले हामी थिलोथिलो परेका बेला नाकाबन्दी लगायो । अहिले कोरोना कहरले तड्पिरहेका बेला हाम्रो लिपुलेक क्षेत्रमा मोटरबाटो बनाई उदघाटन गर्यो । अहिले रोजीरोटीका लागि उसको देशमा पुगेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई क्वारेन्टाइनबाट उठाएर बोर्डरमा ल्याई छोडेको छ, ताकि हजारौंको संख्यामा रहेका ती प्रवासी नेपालीको व्यवस्थापनमा नेपाल अल्झियोस् । त्यही बेलामा आफूले उसको जमिन लुटिरहन पाइयोस् । यही कुनियतका साथ नै उसले त्यो अमानवीय व्यवहार गर्दैछ । अहँ, यस्तो शत्रुवत ब्यवहार गर्ने ऊ कदापि असली छिमेकी हुन सक्दैन । उसका विस्तारवादी हर्कतका बिरुद्ध अब हामी जाग्नैपर्छ । अमरसिंह र बलभद्रहरु बनेर अब हामी जाइलाग्नु पर्छ त्यस दुष्ट छिमेकी भनाउँदो शत्रुका बिरुद्धमा । मातृभूमिको रक्षाका लागि आवश्यक परे शहीद बन्न पनि तयार हुनुपर्छ हामी । त्यो वीरतापूर्ण इतिहासलाई स्मरण गरौं – हाम्रा पुर्खाहरुले आधुनिक हतियारले भरिपूर्ण रहेको अंग्रेज सेनासङ्ग खुकुरी र तरवारका भरमा लडेका थिए र तिनीहरुलाई परास्त गरेका थिए ।
एकमुठ्ठी पानीको भरमा कोखिलामा ससाना लालाबालाहरुलाई बोकेर पनि नालापानीमा अंग्रेजविरुद्ध लडेका थिए हाम्रा पुर्खाहरु । अमरसिंहको वीरताको त्यो इतिहास, उजिरसिंहको वीरताको त्यो गाथा, फेरि एकपटक स्मरण गरौं । हामी तिनै वीर पुर्खाका सन्तति हौ । फेरि एकपटक हामीले देखाउने बेला आएको छ– नेपाली जातिमा वीरताको त्यो रगत अझै सुकेको छैन । त्यसरी अगाडि बढियो भने मात्र हामीले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नेछौ । ‘आमा तिम्रो छातीको पाटो’ मूलतः त्यही सन्देश बोकेर आएको छ ।
देशको माटो लुटिएका बेला स्वाभिमानी देशभक्तहरुलाई अमरसिंह र बलभद्र बन्न आव्हान गर्दै ल्याइएको यो गीत वास्तबमै उत्कृष्ट खालको छ । यसले मातृभूमिको रक्षाका लागि आवाज उठाइरहेका नेपालीहरुलाइ उर्जा दिने विश्वास राख्न सकिन्छ । सर्जक रमेश बिजी, गायक र गायिका नारायण रायमाझी र शान्तिश्री परियार लगायत देशभक्तिपूर्ण भावको यो उर्जावान गीत ल्याउन योगदान पुराउने टिमका सम्पूर्ण सदस्यहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद । आगामी दिनमा पनि देशको माटो जोगाउन अभिप्रेरित गर्ने खालका यस्तै उर्जावान देशभक्तिपूर्ण गीतहरुले निरन्तरता पाऊन् भन्ने अपेक्षासहित यो गीतको सफलताको हार्दिक शुभकामना !
'जित्छौं एकदिन कोभिड भाइरस' म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
कविता | आमा म सहर बस्दै बस्दिनँ
सरकारको नाममा बिन्तीपत्र
बैशाख ६, २०७७ शनिबार गणेश शाही